विभेदमा परेका समुदाय र कुशल नेतृत्वलाई सत्तालोभि रे ! खाटि राष्ट्रवादी हुन् – ठाकुर – Sanghiya Online
मधेशी , भोजपुरा, अवधि, थरुहट होस वा दलित,मुस्लीम, जनजाती जे भए पनि हामी विकाउ, लालची, नोकर, दलाल, जासुस, विदेशी, अपराधी, अ.तहरुको विभुषणले सुशोभित छौ । मतवाली, ज्यापू, मदिशे, अछुत, छुतको कोटिमा तिरस्कृत विभेदमा परेको समुदाय क्षेत्रका कुशल नेतृत्वलाई सत्तालोभि हुन भन्न सक्नेहरु नै खाटि राष्ट्रवादी हुन । यो मुलुकमा आज सम्म नेता वन्ने प्रतिस्पर्धा खुवै देखियो तर राज्यलाई नेतृत्व दिने योग्य र कुशल नेताहरु यो पुस्ताले जन्माएकोमा हामी गर्व गर्नुपर्छ ।
यो भ्रमलाई तोडनु र भुगोल भन्दा देश ठुलो हो। यो देशको सर्वाङ्गिक विकासको लागि समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै उपयुक्त हो भन्ने यस पुस्ताको विवेकवाट निर्माण भएको यो जनता समाजवादी पार्टिलाई विगत केहि दिन देखि एक सिन्को नभाच्ने गोजि फेसबुकिया पत्रकारहरुले आज तथानाम टुटफुटको ताजपोशी गर्ने गराउनेहरु तछाड मछाड गरेको देखिन्छ । नानाथरीको हाऊगुजी छरेको छ । हाम्रो विचमा महन्त, अशोक राइ, डा. बाबुराम, भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजी जस्तो एक से एक कुशल र योग्न अग्रज नेताहरु छन् । मलाई त लाग्छ वहाँहरुले प्रदेशको राजनितिमा दक्षता सिद्ध गर्नु भयो ।
अव देशको राजनितिमा पनि दक्षता सिद्ध गर्ने अवसर पाउनु पर्ने हो । हामी एक पटक अग्रजहरुलाई सकारात्मक र उपयुक्त निकासको आग्रह गरी मतपेटिका राखौ र प्रजातान्तिक तरिकावाट नेतृत्वको छनौट गरौ । यो नै उपयुक्त र सकारात्मक निकास हो । नेताहरुको काँधमा देशको समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको ठुलो अभिवारा आई पुगेको छ ।
अमmै सत्ताको मmेलमा टुटुफुटको नकारात्मक वाटो लागेमा हाम्रो आउने सात पुस्ता यिनी राज्यका एक जातिय एक नश्लिय सोच र तिकडमको सिकार हुनेछ । हेक्का रहोस हामी नेपालीले सत्ता शैतानको होइन सेवक र सन्यासि हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक्ता महशुस गरेका छौ । हामी वैकल्पिक शक्तिवाट वास्तकि विकल्पको खाजि भै रहेको यस्तो कठिक घडीमा सवै आफ्ना समर्थक सुभेक्च्छुकहरुलाई धर्यधारण गर्ने खाँचो छ ।
हामी राजामहराजा देखि काग्रेस , कम्यूनिष्टको सरकारको सफल कार्यकाललाई कसैले नसम्मिmने गरी नयाँ नेपालमा नयाँ यूगको प्रतिक्षामा समावेशी सरकार र वाँकी अवधि सफल कार्यकालको आकाक्षि छौ । यो सपना पुरा हुने वहाँहरुवाट अपेक्षा राख्दछौ ।